Maxaa loo diidaa codsiyada Farmaajo ee xallinta Khilaafaadyada? – AwKutub News
Maxaa loo diidaa codsiyada Farmaajo ee xallinta Khilaafaadyada?
Leave a Comment on Maxaa loo diidaa codsiyada Farmaajo ee xallinta Khilaafaadyada?
Madaxda maamul goboleedyada ayaa shir dhowr maalmood uga socday magaalada Kismaayo ka dib, waxay 8 Siteembar ku sheegeen in ay xiriirka u jareen dawladda dhexe ee Federaalka. Maalmo ka dib, 14kii Siteembar, waxay soo saareen shuruudo ay ku xireen wixii wadahadal ah ee ay dawladda la yeelanayaan, kuwaasoo ay ugu weynayd in la helo “daraf 3aad oo qaata door dhexdhexaadin iyo damaand ah”.
Previous Entry Baarlamaanka Soomaaliya oo laga dalbaday in uu sharci adag kasoo saaro jinsi-faquuqa iyo hayb-sooca
Next Entry Fadhiga Mudada Dheer Waxaa laga Qaadaa Cudurro Halis Ah